Ny olan'ny saron-tava bété - Afrikhepri Fondation
Vakiteny: 6 min
UNy zanak'olo-mpiray tam-po nitaizana ny fomban-drazana sy ny mpanakanto nampianarin-tena dia nampianatra ahy ny fomba mahaliana momba ny fananganana any Bété taloha.
Namela tapa-kazo nendahana arina tamina arabe feno arabe ilay mpanakanto. Ireo mpandalo voalohany dia nahatakatra fa nasaina izy ireo hanaraka ireto soso-kevitra arina ireto momba ny endrika namboarina tao anaty ala, soso-kevitra nankasitrahan'ilay mpanakanto ary noheveriny ary dia mandroso amin'ny fandrosoana ny famoronana no. tsy misy intsony ny soso-kevitra. Avy eo dia tokony ho vita ny asa ary ny artista dia namarana ny "antso ho an'ny famoronana mpiara-miombon'antoka" amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ao anaty boaty masina natokana ho an'ny fanahin'ireo fanahy "voarindra".
Ny hetsika famoronana dia nitranga teo ambanin'ny mariky ny fiaraha-miasan'ireo "izay mahita mazava", tsy isalasalana fa ny zava-kanto, "Kouè-you" (avy amin'ny Kouè: Mort et you: enfant) amin'ny teny hafa "Zanaky ny tontolo hafa", dia natao hitondra ny hafatry ny razana amin'ny fiarahamonina velona ary ho fitsipiky ny firaisan-kina.
Ny faniriana manamarina ity fomba famoronana tsy mahazatra ity dia mitaky ny hieritreretantsika fa tsy maintsy efa nahatonga ny endriny izany angamba rehefa tsy mifanaraka amin'ny fivorian'ny fatiantoka ireo fepetra napetraky ny fihaonambe masina. Ny maha-zava-dehibe ny tokony hifandraisana hatrany amin'ny razana dia afaka manolotra an'io fomba io
niray tsikombakomba tamin'ny fiaraha-miasa tam-po tamin'ny fanombohana ny andalana.
Amin'izany lafiny izany ihany, tsy azoko atao ny manohitra ny faniriana hiresaka momba ny "didiga": ny "didiga" na ny "kanton'ny mpihaza Bété" namboarina tamin'ny teatra nataon'ny mpanoratra tantara an-tsehatra lehibe Bernard Zadi avy amin'ny foko Bété.
Didiga ara-bakiteny no nilaza i Didiga hoe "lazao ny arofanina". Raha ny marina, tao amin'ny fiaraha-monina taloha, nandritra ny hariva talohan'ny fitsidihana fihazana dia nifanena ireo lehilahy efa lehibe ary nanana adidy am-bava ny nandroaka ireo "zavatra ratsy" rehetra nonina azy ireo hatramin'ny, fara fahakeliny, maraina ny fitsangatsanganana mampidi-doza, ny "harato ny teny" dia miseho amin'ny alàlan'ny fihazana.
Ny tena tombotsoan'ny "milaza ny fako" alohan'ny fikatsahana dia ny filàna hisorohana ny loza mety hitranga, izay mino fa voafandrika ao anaty harato ny biby dia naratra mafy noho ny fankahalana ny mpifanolobodirindrina aminy. Ny didiga àry dia nanaporofo fa hetsika fanadiovana, katolika, talohan'ilay fitadiavana.
Ny orinasan'i Bété dia nihevitra fa ny fiainana eo amin'ny fiaraha-monina dia azo ampitahaina amin'ny fitsangatsanganana fihazana ary ilaina io didiga io mba hananganana lehilahy "hiara-miaina".
Izany no mahatonga ny fitsaboana aretin-tsaina mihevitra ny tenany ho mpandova voajanahary ho an'ny didiga satria, amin'ny fampiroboroboana ny endrika preverbal amin'ny fiteny mandrafitra no nanombohany azy.
amin'ny fiainana ara-tsosialy.
Araka ny filazan'i Larem the Bété dia nidina avy tany an-danitra tamin'ny gadra izy ireo. Mamela ny tenantsika hanampy izahay: fiteny izay noforonin'izy ireo manokana noho ny hetsika kanto notarihin'ny Teny.
Ny fiheverana ny famoronana zava-kanto izay vao avy nolazaiko dia ny fanamelohana mamitaka ny mpahay siansa toa an'i Denise Paulme izay, ao amin'ny bokiny Bété "fiarahamonina omaly sy anio", dia nilaza fa ny zavatra nataon'ny Tsy nisy ny zavakanto teo amin'ny Bété taloha, mpiady iray izay mety nanokana ny heriny rehetra ho an'ny ady, nanamafy fa nolavinay:
raha misy teoria famoronana zavakanto dia tsy maintsy misy ny hetsika famoronana sy ny vokatr'io asa famoronana io!
Ny ideolojia Ivoariana dia nahatonga ny "lavenona tavy" azony tamin'ny rivo-piainana natolotr'i mpanjanaka azy: ny fahafantarana fa ny Bété dia olona kamo, maloto tsy misy kolontsaina tsy miraharaha ny sarin'ny saron-tava. Tsy nisalasala ireo mpitondra vaovao nanararaotra io fotoana io hamatonana ity "Nigger of the Negroes" (ny Bété de Gagnoa) amin'ny alalàn'ny fiainan'ny tanora
Izany no antony mahafaly ahy manokana amin'ny alalàn'ny namako Larem fa misy tokoa ny fanangonana saron-tava Bété ary manolotra ahy hanoratena ny famoahana ny bokiny manaraka izy amin'ny "Masks Bete ".
Raha ny marina, tsy mba nankasitrahako ny fampielezan-kevitra fa mpamono olona i Bété raha tsy misy kolontsaina.
Ny tontolom-piainako, manan-karena amin'ny soatoavina nentim-paharazana, dia tsy namela ahy hanao izany: fony aho mbola kely, tao amin'ny efitrano fandraisam-bahian'ny dadatoako Grobli Gnébri, mpitsara fanao mahazatra, dia nahita sarivongan'ny razambe ary tsy mieritreritra aho fa nahafinaritra ity toetra ity. handravahana ny efitranony amin'ny zavaboary vahiny!
Ary ny reniko dia nilaza tamiko fa rehefa niverina avy tany an-tsaha ho any amin'ny "distrikan'ny masoandro" ao Gagnoa izy dia nametraka ny entany teny an-tampon'ny havoana Dianke izay nivarotan'ny mason'ireo mpivarotra Dioula azy, ho tokana tokana amin'ny fisaintsainana ireo "koue-ianao."
Raha tsy niraharaha ny sarivongana ny Bété, maninona no manana anarana amin'ny fitenim-paritra ny vokatr'ireo sarivongana ireo ary nahoana ny vehivavy mpikarakara tokantrano no faly nandinika azy ireo teny amoron-dalana fa tsy niverina nody haingana haka aina. asa mafy any amin'ny firenena?
Nanome toky ahy ny reniko fa ny fomba fisaintsainana an'ireo kouè-you "nolazainao" taminy dia nametraka ny androny!
Rehefa nanome ny fifanarahana feno hafanam-po i Alain dia nandefa ahy ny lahatsorany sy ny famerenany ny sarontava Bété tamin'ny alàlan'ny mailaka. Hitako ireo ao amin'ilay mahagaga. Haleloia! Maika hamily ireo pejy aho ary mahita tsikelikely ireo sanganasa faktiora iray izay mahataitra ahy sy rehareha! Saron-tava izay tsy isalasalana fa ny originality a
"Misimisy kokoa" amin'ny fahalalana fa misy an'izao tontolo izao ny famoronana artista afrikanina. Tsy azo lavina fa ny antony ara-politika no tena nitazomana ireo zavatra ireo hatreto.
Ireo saron-tava antsoina hoe "hala" (p17) izay tiako kokoa ny mahita hazo sy centipedes mihohoka eo an-damosin'izy ireo: haneho ny fahafahany “mamihina” ny tany terestrialy? Ary sarontava fandevenana (p 11) amin'ny alahelo sy ny alahelo
Noheverina fa nilaza ny zava-drehetra izy ireo tamin'ny nanambarany fa ny saron-tava dia manao masika wète.
Aleoko kokoa miteny fa ny saron-tava bété dida niaboua wè guéré dia manana fitoviana amin'ny fianakaviana satria vokatra avy amin'ny fanehoana famoronana isan-karazany ao amin'ny faritry ny "civilisation krou".
Ho an'ny mpandinika ny "Zavakanto Afrikana" (Larem sakaizantsika) ny saron-tava bété, satria ny masks wè na niaboua amin'ny ankapobeny dia manaitra ny fampihorohoroana satria ny asany dia ny mampihorohoro ny mponina tsy voatanisa mba hitazomana azy ireo ao amin'ny sata fandefasana.
Ny zavatra niainantsika amin'ny maha-mpanakanto sy psychoanalyst (psychart-therapist) dia ahafahantsika mieritreritra fa ny firaisana ara-nofo miaraka amin'ny famoronana tany am-boalohany dia ny fepetra takiana «mifehy» ny tsimokadia manohintohina ny vatana anaty. Amin'ny teny hafa: ny finiavana mamaritra ny famoronana
dia ny famonoana biby goavam-be: ny leoparda panther liona hippopotamus mamely ny ala anatiny toy ny ala ivelany. Ity no fomba andoavana ny zony hiditra ao amin'ny fiaraha-monina olombelona.
Ny fiasan'ny zavakanto zava-kanto noho izany dia tsy "finaritra tanteraka amin'ny maso" izay misy ihany ho an'ny esthete ankehitriny izay navahana tamin'ny "mankafy" satria nafahana avy amin'ny ahiahy mony ny fahavelomaso, fa ny fandresen'ny fiteny izay manamafy ny fifehezana an'andriamanitra ny maha-izy azy.
Ary raha manaingo ny asany ny mpanakanto mamorona amin'ny fosa ny leopona na hodi-kaody dia ny manambara ny fandreseny amin'ireo biby goavam-be ireto izay manjaka amin'ny ala anatiny: ireto no trôjika izay miasa ny fijoroana ho vavolombelona ny fahaizany an'ohatra.
Ny saron-tava sy ny kojakoja noho izany dia fiteny iray izay nanamboaran'ny olona ny tetezamita nanomboka teo amin'ny sehatry ny sary an-tsaina ho eo amin'ny saha ara-panoharana ary voamarina isika amin'ny filazana fa ny saron-tava no mampatahotra kokoa dia ny fifandonana hanatratrarana ny olombelona !
GROBLI Zirignon, Psychart mpitsabo